Ny voalohany anglisy-bahoaka feno isan'ny WeChat, FastenerInfo, no natomboka tamin'ny fomba ofisialy! - China Cixi Zhencheng milina
Ny voalohany anglisy-bahoaka feno isan'ny WeChat, FastenerInfo, no natomboka tamin'ny fomba ofisialy!
Ry fastener mpividy sy ny mpamatsy,
Naorina tamin'ny 1998, Shina Fastener Info efa nanompo ny fastener orinasa fantatra amin'ny anarana hoe malaza indrindra fastener haino aman-jery any Shina, anisan'izany ny B2B tranonkala, gazety, foibe fanofanana ka hanao varotra fampisehoana.
Ankehitriny, Faly izahay manambara fa Shina Fastener Info efa nanomboka WeChat kaonty ofisialy FastenerInfo, ny voalohany-English rehetra WeChat sehatra in fastener tantara, izay afaka:
manampy eran-mpividy mba hahita ny sahaza Sina fastener mpamatsy
manampy China fastener mpanondrana mba hanitarana ny eran-tsena
Ny asa fanompoana endri-javatra dia avy tsy ho ela ... Aoka isika dia maneho!
1. Mini fandaharana
FastenerInfo ho ela hampivelatra ny Mini Program fandrakofana an'arivony fastener sy mifandray mpamatsy any Shina, anisan'izany ny fasteners, milina, fitaovana, lasitra, ambonin'ny fitsaboana, akora.
Ny mpividy aho, azoko:
-Post mividy Info
-Search mpamatsy (by orinasa anarany / Standard)
-Browse famatsian Info
Ny mpamatsy aho, azoko:
-Display orinasa Info
-Post famatsian Info
- Browse nividy Info
2. Standard karohy
Fa ny tsy hanahirana ny eran-mpividy, FastenerInfo dia hampiditra "Standard Search" endri-javatra. Standards toy ny Din, IFI sy Jis ho tafiditra.
Amin'ny alalan'ny isa hiditra ny fitsipika, dia ho hitanao ny lisitry ny mpamatsy vaovao manan-danja.
Ao amin'ny FastenerInfo, dia afaka ihany koa ny mamaky ny zava-misy ny vaovao isan-kerinandro fastener nitranga tao Shina sy ny sisa izao tontolo izao.
Anisan'ny lohahevitra indostrialy vaovao, orinasa fanadihadiana, sy ny vokatra vaovao ny teknolojia, antontan'isa ara-barotra, vaovao fampirantiana, antidumping, vidin'ny vy, fiarovana ny tontolo iainana, mpampiasa farany-tsena, ny tahan'ny fifanakalozana, sns
Ary izany no fotoana mety ho anao hanao raharaham-barotra amin'ny WeChat fastener Official Account!
Ny Shina fastener Info foibe, izao tontolo izao ny fastener tsena!
Araho antsika avy hatrany mba hahita ny fahafahana sy ny raharaham-barotra vaovao nohavaozina fastener Shina vaovao!
▲ Long gazety QR code mba hitsidika tranonkala
▲ Long gazety QR code mba télécharger CFD gazety
▲ Long gazety QR code fisoratana anarana